”Aabahay ayaan ku waayey!” – Liverpool oo weli la xanuunsanaysa 37 qofood oo ay geeridooda sababtay ciyaartii Liverpool v Atletico ee sanadkii hore | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha ”Aabahay ayaan ku waayey!” – Liverpool oo weli la xanuunsanaysa 37 qofood...
”Aabahay ayaan ku waayey!” – Liverpool oo weli la xanuunsanaysa 37 qofood oo ay geeridooda sababtay ciyaartii Liverpool v Atletico ee sanadkii hore
(Liverpool) 03 Nof 2021 – Waxaa caawa dheelaya Liverpool vs Atletico Madrid, balse waxaa kulankii ugu dambeeyey ee ay Anfield ku dheelaan lagu xusuustaa mashaqadii Covid-19 oo markaa bilow ahaa iyo sidii uu Diego Costa, uu iskaga dhigayey inuu ku qufacayo wejiyada weriyeyaashii ciyaarta.
Costa ayaa ficilkaa aad loogu cambaareeyey, iyadoo ay saxaafaddu qortay in xitaa waloow aanu ahayn nin akhyaarnimo lagu xanto uu misna aad hoos uga dhacay xitaa heerkiisaas.
Taageerayaasha iyo maamulka Liverpool ayaa sidoo kale dareensan in ay ahayd in aan gebi ahaanba kulankaa la ciyaarin.
Wargaysyadii subaxdii soo baxay waxaa qaarkood ku qornayd — Arbaco, Maarso 11 2020 — xaaladda kasii daraysa ee karoonaha dartii waxay La Liga go’aamiyeen in taageerayaasha laga joojiyo garoomada.
Xitaa kooxda reer Madrid ee Getafe ayaan go’aan ka sugin UEFA iyadoo iska diiddey inay u safarto Talyaaniga oo ay kula ballansanayd Inter Milan dhanka Europa League iyadoo uu guddoonkooda Angel Torres sheegay inay xitaa diyaar u yihiin inay dhibcaha huraan.
Madrid ayaa sidoo kale ahayd xudunta cudurka iyadoo uu El Pais qoray in 55 dhinteen halka la xaqiijiyey 22,000 oo kiis isla fiidka la dheelayo kulankaas Liverpool, waxaa xirnaa oo marnaa jidadka iyo makhaayadaha Madrid.
Waxaa cudurka oo ay kulankaa ka qaadeen u geeriyoodey 37 qofood oo uu ka mid ahaa Richie Mawson oo ahaa 70-jir caafimaad qabey, isaga iyo wiilkiisa Jamie 3 jeer ayay maalintaa telefoonka ku sheekaysteen iyagoo welwelsan.
Richie ayaa wiilkiisa waydiiyey: ”Ma kula saxan tahay inay imanayaan taageerayaasha Spanish-ku?’ Richie oo 63 sanadood raacayey kulamada Reds ayaa eeday ama sababsaday kulankaasi.
Tan ugu darani waa dayacaadda ka timid 3 dhinac. Dowladda Spain oo handaraab soo rogtey waxay taageerayaasha Atletico usoo jeedisey inaysan safrin balse khasab kama dhigin, halka UEFA & UK aysan wax tillaabo ah qaadin.
Waa kulan ka ag dhow musiibadii Haysel oo ay ku dhinteen 39 taageere 1985-kii, kuwaasoo u badnaa kuwa Juventus, balse ay sabab u ahaayeen taageerayaasha Liverpool.
Previous articleWaxaa dhexmaray jacayl guur ku dhamaaday balse taa waxaa gacan ka gaystey GOOGLE!!
Next articleNimco Happy oo lacag badan ka heli karta heesta u qaraxdey! (Fannaaniin caalami ah oo ka hadlay & moodallo soo qaatay)